50 Muhaajiriin Soomaali & Itoobiyan ah oo si ulakac ah loogu harqiyay badda Yaman – Kasmo Newspaper
50 Muhaajiriin Soomaali & Itoobiyan ah oo si ulakac ah loogu harqiyay badda Yaman
Updated - August 9, 2017 10:38 pm GMT
London (Kasmo), Ugu yaraan 50 dhallinyaro ah oo u dhashay Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa dhintay ka dib markii si ulakac ah loogu daadiyay badda Yaman saaka aroorti, sidaasna waxaa xaqiijinaya Ururka Caalamiga ah, IMO (International Organization for Migration) ee Muhaajiriinta.
Dadkaas ayaa la sheegay in ninkii waday oo ka mid ahaa dadka wax ku tahriibiya doonyahay uu ku khasbay in ay badda isku daadiyaan ka dib markii uu sheedda ka arkay markab ay leedahay ilaalada xeebaha Yaman.
Shaqaalaha IMO ayaa helay maydadka 29 qof oo Afrikaan ah oo lagu aasay xeebta Yaman ee Gobolka Shabwa ee kulaala Gacanka Cadmeed; qaar ka mid ah dadkii badbaadayna waxay sheegeen in tahriibiyihii dib ugu laabtay Soomaaliya, si uu dad kale u soo daadgureeyo, iyada oo laga faa’ideysanayo qaska ka socda dalka Yaman.
Afhayeen IOM uga hadashay Xarunta Geneva, Olivia Headon, ayaa sheegtay in dadka masiibadu ku dhacday ahaayeen dhammaantood dhallinyaro, da’duuna isku celcein ahaan ahayd 16 sano, intii ka badbaadday ayaa sheegtay in 22 kale la la’yahay wali.